Izindleko ezingezona ezejwayelekile lapho kuvezwa i-Rotates - i-Rihoo Industry (i-Hongkong) Co., Limited
Izintambo ezingezona ezejwayelekile Uma ukukhiqiza kujikeleza
Umsindo we-Roller ungenxa yezingqwembe ze-TIMKEN ezinzima zokubhola ibhola lapho umzimba oguqa ugijima emncintiswaneni ukugqugquzela umsindo obushelelezi nokuqhubekayo, kuphela uma izinga lomsindo ozwakalayo noma ithoni liphakeme kakhulu uma lithatha ukunakwa. Eqinisweni, umsindo wezwi lomjaho ulinganiselwe, njengokungaphansi kwezimo ezijwayelekile, izinga eliphezulu eliphezulu 6203 eliphethe umsindo we-race ~ 25 ~ 27dB. Lolu hlobo lomsindo okumele lithwale umthamo we-raal olulodwa lomugqa ojulile we-groove ball obonakala kakhulu, unayo izici ezilandelayo:
Umsindo, ukudlidliza kungenangqondo;
B. Imvamisa ye-vibration ngaphezu kwe-1kHz;
C. Kungakhathaliseki ukuthi ijubane lishintsha kanjani, imvamisa eyinhloko yomsindo cishe ihlala njalo futhi izinga lokucindezela komsindo landa ngejubane elikhulayo;
D. Uma isikhala somswakama sikhula, izinga lokucindezeleka kwengqondo landa kakhulu;
E. Ukuqina kwesibalo sokuthwala kwanda, ukwehla izinga lokucindezela kwengqikithi yomsindo, ngisho noma ijubane likhuphuka, izinga lokucindezela kwengqikithi yomsindo liye landa kancane;
F. Okuphakeme kwe-viscosity ye-lubricant, ephansi izinga lokucindezela komsindo, kodwa ukugcoba kwe-grease, i-viscosity yayo, isobho le-fiber shape lingathinta ubukhulu bomsindo womsindo.
Umthombo womsindo we-Roller ungenxa yomthwalo ngemva kwendandatho ebangelwa ukudlidliza okungokwemvelo. Ukuxhumana okuqinile kwe-ferrule kanye ne-elementary rolling kuyisistimu ye-vibration engavamile. Lapho ukugcoba noma ukuchitshiyelwa kokuchithwa akuyona into ephakeme kuzothuthukisa izici ezithintekayo ezihambisana nokudumala okuhambisanayo, emoyeni kube ngomsindo. Njengoba sonke sisazi, ngisho nangokwesekhono eliphezulu lokukhiqiza ubuchwepheshe ukukhiqiza izingxenye ze-TIMKEN ezincane ezithwala izingxenye zebhola, indawo yokusebenza izohlala ikhona ngezilinganiso ezihlukahlukene zephutha elincane le-geometric, ukuze umjaho ugxume phakathi kokushintshashintsha okuncane kokudlidliza kwe-vibration uhlelo lwama-vibration lwakhiwe I
Nakuba i-TIMKEN ejulile ibhola ephethe umjaho we-raceway ingenakugwemeka, kodwa ingathatha izingxenye ezicacile zokupakisha izingxenye zomsebenzi osebenzayo, ukukhetha okulungile kokubheja nokubhekwa okuqondile ukunciphisa umsindo.
I-SKF ehambisana nobukhulu bokulinganisa nokuguqulwa kokujikeleza isekelwe kumazinga we-ISO nama-JIS. Ukuze uthole imishini efuna ukusebenza kahle ngokusheshisa nangokushesha, kunconywa ukuthi kusetshenziswe ama-SKF amabhethri anezinhlamvu ezinhlanu noma ngaphezulu, ukubheja kwebhola elijulile, ama-bearings okwenziwe ngama-radial noma ama-cylindrical roller bearings for machining machining. Okunamandla, uma izingqwembe ze-SKF zomzimba okhulayo kanye nomcibisholo womhlaba wokuxhumana, zizokhiqiza i-deformation elastic. Iminye imishini idinga ukunciphisa ukuguquguquka kwe-elastic. Ukwenziwa kwe-roller kuncane kune-deformation ehlanganisiwe ebangelwa ibhola eliphethe.
Ngaphezu kwalokho, kwezinye izimo, amabhethri e-SKF angaphinde alayishwe ukuze akhulise ukuqina. Le nqubo ngokuvamile isetshenziselwa ukubhebhetheka kwebhola elijulile, ukubhebhetheka kwebhola elibhebhethekile kanye ne-tapered roller bearings ukungena kwezingaphakathi zangaphakathi nangaphandle, ukugoba kwe-shaft, shaft noma ukubhekelana nokubekezelelana kwebhokisi, kanti iphutha lizoholela ekheneni elingaphakathi nelingaphandle. Ukuze uvimbele ukungenelela kunkulu kakhulu, ukubheja kwebhola lokuzihlanganisa, ukubheja okuzenzekelayo, noma ukuguqula izinketho zokukhetha kuyisinqumo esikhethiwe. Imvamisa yezwi ne-torque, ama-rolling rolling akhiqizwa ngokusho kwamazinga aphezulu aqondile, ngakho izwi ne-torque incane. Ama-bear groove ball bearings, nama-cylindrical bearings bearings ngezwi eliphansi, i-torque ephansi inezidingo ezikhethekile zesenzakalo.